Nezvedu - Shenzhen Chance Technology Co., Ltd.
Shenzhen Chance Technology Co., Ltd. chikamu chekutengesa mhiri kwemakungwa kweMatrix Crystal Technology (Shenzhen) Co., Ltd, yakavambwa muna 2005, iine makore gumi nematatu ruzivo rwekugadzira nekugadzira diki LCD kuratidza kubva pa0.96" kusvika 13.3" , E-bepa, OLED kuratidza. Kune mitsara yekugadzira 6 nemichina yose yakazara-otomatiki, lapping-machines, COG + FOG machines, glue dispensers, BL assembly machines, etc. 10 + vashandi muboka rehutano uye vashandi ve200 vari pano kuti vagadzire zvigadzirwa zvakanakisisa. Munguva yepamusoro, 100K pcs LCD modules inopedzwa nevashandi vangangosvika mazana mana pano pazuva.
Kupa emhando yepamusoro skrini, kusangana neakajairwa zvinodiwa, tsigiro yevatengi kuti vaongorore musika ibasa redu uye mishoni nguva dzese. Nekudaro, isu tinopa tarisiro yepamusoro kune mhando mune ese maficha. Isu tinosarudza vatengesi vemhando yepamusoro senge AUO, Innolux, CPT, LG uye Hitachi. Isu tinodzidzisa vashandi kuvandudza kugadzirwa. Isu tinodzidzisa vatengesi kushandira vatengi nekufarira uye ruzivo rwehunyanzvi.
Chance ndiye mutengesi mukuru wemakambani ane mukurumbira, BYD, TCL, DJN uye uwane mhinduro yakanaka kubva kwavari. Kuwana kuvimba kwevatengi kunowedzera chivimbo chedu uye chishuvo chekutsigira zvizere vatengi.
1. High-tech LCM ine OLED kuratidza maitiro asi inodhura-inoshanda.
2. 13-makore ruzivo pakugadzira uye kugadzira LCD skrini.
3. Zviratidziro zvakasiyana zvinopihwa.
4. 6 mitsara yekugadzira. 10+ vashandi muchikwata chemhando.
5. Musika wakafara muEurope, America, uye Asia.
6.Kurumidza kupindura. Professional technical support. Nguva pfupi yekutumira.
Mukana ndewe wakakwana chete iwe!